Warshad fudud | Soo-saareyaasha iftiinka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
14W 28W 18W nalka qaansada oo leh iftiin
Muuqaalka patentka, qaabka cusub, shaambada haysa iyadoo la isticmaalayo goynta iyo wareejinta, xiriir giraan adag, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo. Siraha sita laambada wuxuu korsadaa hal shumac madaxa haysa, 250V, caag dabacsan oo tayo sare leh caag injineernimo, xoog farsamo sare, shucaac dabacsan nooca Rotary, waxqabadka xiriirka wanaagsan. Ku habboon nalalka qaybta, qolka shaybaarka, aqoon isweydaarsi heerkiisu sareeyo, iwm.
Fasalka 1 14W 18W 28W nalka fuji qeybta fuji
Muuqaalka patentka, qaabka cusub, shaambada heysata iyadoo la isticmaalayo goynta iyo wareejinta, amaan iyo kalsooni leh. Siraha sita laambada wuxuu korsadaa hal shumac madaxa haysa, 250V, caag dabacsan oo tayo sare leh caag injineernimo, xoog farsamo sare, shucaac dabacsan nooca Rotary, waxqabadka xiriirka wanaagsan. Ku habboon nalalka qaybta, qolka shaybaarka, aqoon isweydaarsi heerkiisu sareeyo, iwm.
nal boodh iftiin xoog leh 14W 28W 35W prism dabool qaybta nalka
Muuqaalka patent, style sheeko, haystaha iftiinka isticmaalaya goynta iyo wareejinta, xiriir giraan adag, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo. Hal shumac madaxa haysa, 250V, balaastigga injineernimada ololka oo tayo sare leh, xoog farsamo sare, shucaac dabacsan oo nooca wareega ah, waxqabadka xiriirka wanaagsan. Khadadka nalka ee birta loo yaqaan 'prism braket' waa mid jilicsan oo xasilloon, oo leh astaamaha boodh hooseeya iyo muuqaal qurux badan, oo ku habboon munaasabadda shuruudo iftiin sare.
aluminium daawaha ilmada-dhibic-dhibic for caafimaadka, cuntada, nadaafadda, korontada, qolka nadiif ah
Hooska iftiinka waxaa loogu talagalay nooca ilmada. Laydhku wuxuu kuxiran yahay hagaha ama si gooni ah ayaa loo rakibay, khadad dhakhso leh oo gudaha ah. Jidhka laambadda iyo wadiiqada ayaa ka samaysan qaybo bir ah waxaana lagu xidhayaa boolal bir ah oo bir ah si loo hubiyo in jidhka laambaddu iyo jidka haga aanu ka dhicin. Lagu dabaqi karo daawada, caafimaadka, cuntada, elektaroniga iyo heerarka kale ee sare ee nalal nadiifinta.
Iftiinka biiyaha ee aan biyaha ka saareynin oo aan caddeyn karin
Nalalka waxay la mid yihiin fasalka IP65. Biyo-la’aan, qoyaan-caddeyn, naqshad quful-caddeyn la'aan ah, qaab-dhismeed macquul ah, qurux iyo deeqsi ah, naqshad xirid badan oo saaxiibtinnimo leh, fudud oo rakibidda iyo dayactirka. Kali hayaha nalka keliya, 250V caag dabacsan oo olol tayo sare leh leh, awood farsamo sare, dhexroor iyo dherer kicinta nooca roogga, waxqabadka xiriirka wanaagsan. Naqshadeynta qormada, qaabdhismeedka is haysta, muuqaalka quruxda badan, fudud ee rakibidda iyo dayactirka, bilowga degdegga ah. Waxay ku habboon tahay gudaha iyo bannaanka meelaha biyuhu ka gudbaan, uumbo-diidka iyo shuruudaha uumiga ka-horjoogsanaya.
fasalka 1 gadaal wiishka ama nalka nadiifka ah ee hoose u fur
Iftiinka si buuxda ayuu ugu habboon yahay keel, waana sahlan tahay in la rakibo. Jirka iftiinka iyo daboolka dambe waxaa ka buuxa daboolid cufnaan sare leh. Ma jiro boodh, fududahay in la nadiifiyo, oo aan dhalaal lahayn, daboolka dambe wuxuu qaataa nooca furan ee albaabka, oo lagu xirayo suun tayo sare leh, fududahay in la furo oo la xiro, fududahay in la ilaaliyo, qaladka guud ee cabirka ayaa ka yar +/- 1mm, flatness wuxuu u dhigmaa JS141.